Labiska (Dugsiga Dhexe) iyo Dharka Dharka | BGA
Dhamaan ardayda dugsiga dhexe waxaa laga rabaa inay xidhaan labis maalin kasta. Nidaamkayaga labbiska wuxuu gacan ka geysanayaa dhisidda isku xirnaan, koox mideysan oo ujeeddadiisu tahay yareynta walaaca ardayga iyo qoyska markii la go'aaminayo waxa ku habboon dugsiga. Waxaan haysan doonnaa labisyo marmar ah oo ay ardaydu si xor ah iyo si ku habboon wax u sheegi karaan. Fadlan eeg boga 17 ee Buug-gacmeedka Ardayga iyo Qoyska wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xeerka labiska ee BGA.
Xiriiriyaha bixiyaha yunifoomka dugsiga